Linn Ko: Samsung Galaxy S4 Root and CWM
Samsung Galaxy S4 (GTI9500) ရဲ့ root နည်းကို ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် …
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ ကို အရင် ဒေါင်းပါမယ် …
CWM Recovery for Galaxy S4 ကို ဒေါင်းရန်
SuperSU flashable zip ဒေါင်းရန်
Samsung Driver ဒေါင်းရန်
Driver ဒေါင်းပြီးသွားရင် ကွန်ပျူတာ မှာ သွင်းထားလိုက်ပါ ..
အားလုံးဒေါင်းပြီးရင် CWM recovery for galaxy S4 လေးကို zip ဖြေလိုက်ပါ … အထဲမှာ
cofface_I9500_cwm_recovery_en_new.tar”‘ နဲ့ odin ပါပါလိမ့်မယ် … Odinကို ကွန်မှာ run လိုက်ပါ …
ပြီးရင် Odin ရဲ့ PDA အကွက်မှာ အပေါ်က zip ဖြေထားတဲ့အထဲက cofface_I9500_cwm_recovery_en_new.tar” ဖိုင်လေး သွင်းပေးပါ..
ပြီးရင် ဖုန်းကို USb debugging on ပြီးပိတ်လိုက်ပါ …. download mode ကို vol- power home ကို 3-4 စက္ကန့် လောက် တွဲနှီပ်ထားပါ ..
ဒီပုံစံ တက်လာပါလိမ့်မယ် …
. vol+ ခလုတ် ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ … ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ..
အပေါ်က ပုံအတိုင်းဆိုရင် download mode ရောက်သွားပါပြီ … ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ Computr မှာ ထိုးလိုက်ပါ ….
Odin ရဲ့ ID.com အောက်နားမှာ အ၀ါရောင်ဖြစ်ဖြစ်၊အစိမ်းရောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြာရောင်ဖြစ်ဖြစ် သန်းလာပါလိမ့်မယ် ..အဲဒါဆိုရင် ဆက်လုပ်လို့ရပါမယ် အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ဆက်လုပ်လို့မရပါဘူး ..ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပါ ..
အရောင်လေးတက်မလာဘူးဆိုရင် USB ကြိုး၊ Driver ပြန်စစ်ပြန်သွင်းရပါမယ် …အရောင် တက်လာပြီဆိုရင် Odin ရဲ့ Start ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ … CWM သွင်းနေပါလိမ့်မယ် .. ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Odin မှာ PASS ပြပါလိမ့်မယ် … ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပါ
အဲလို PASS ပြသွားရင် မိမိဖုန်း CWM သွင်းပြီးပါပြီ .. reboot ကျပြီးရင် ပြန်တက်လာရင် CWM သွင်းပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် …
CWM သွင်းပြီးပြီ ဆိုတော့ root နည်းစပါမယ် .. အပေါ်မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ CWM-SuperSU-v0.99.zip ဖိုင်လေးကို sd ကဒ်ထဲကို folder မဆောက်ပဲ ထည့်ထားပါ …. ပြီးရင် ဖုန်းပိတ် recovery mode ကို vol+ power home တွဲနှိပ်ပြီး ၀င်ပါမယ် ..ကြာကြာနှိပ်ထားပါ ..logo တက်လာရင် လွှတ်လိုက်ပါ .ဒီပုံစံလေး တက်လာရင် recovery mode ထဲကိုရောက်ပါပြီ..
install zip from sd > Choose zip from sd ကဒ်ကို (vol ခလုတ်နဲ့သွားပါ) …ရောက်ရင် မိမိထည့်ထားတဲ့ CWM-SuperSU-v0.99.zip ဖိုင်လေးကို power ခလုတ်နဲ့ နှိပ်လိုက်ပါ .yes ပေးလိုက်ပါ ….. သူ့ဟာသူအလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ..အောက်နားမှာ finished or done or complete တစ်ခုခုပြပါလိမ့်မယ် ..ပြီးရင် go back နဲ့ နောက်ပြန်သွားပြီး reboot system now လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ဖုန်းပြန်တက်လာရင် မိမိဖုန်းမှာ Superuser လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် …
Myanmar font အတွက်
Font Changer နဲ့ Frozen Keyboard pro ကို install လုပ်ပါ...
Posted by Linn Ko at 3:40 PM